Yonke imikhuba yase-Italy okufanele uyazi | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | 24/09/2021 15:00 | Cultura, Italia
I-Las amasiko ase-Italy Yilezo zezwe elinezimpande zamaGrisi-Latin, zona lezo eziye zakha amasiko aseSpain phakathi namakhulu eminyaka. Ngakho-ke, awahlukile kakhulu kunawethu, okungenani maqondana nokubaluleke kakhulu nokhokho.
Kodwa-ke, ngaphandle kwalokhu esisanda kukutshela khona, amasiko ase-Italy aveza izinto ezingafani ezihlukanisa nalabo abajwayele ukwenza kwezinye izizwe abanamasiko abo Isi-substrate sesiLatini. Akukho abangakwenza, ngokwesibonelo, amasiko ama-French gastronomic (lapha sikushiya i-athikili ekhuluma ngabo) noma isiPutukezi kanye nalezo zezwe eliwela umfula. Ngakho-ke, sizokutshela ngamanye amasiko akhetheke kakhulu e-Italy.
1 Kusuka ekuvezeni imibono kuya enkambisweni yenkolo
1.1 Ukuchaza, isiNtaliyane ngokweqiniso
1.2 Ukudla, isiko phakathi kwamasiko ase-Italy
1.3 Ukukholelwa, okuvela kumaNtaliyane
1.4 Ukushayela, inkinga elindile
1.5 Izingubo, emuva emfashini
1.6 I-Opera, inkambiso yangempela yase-Italy
1.7 Ukubhikisha, okuhambisana nohlamvu lwase-Italy
1.8 Izinkulumo nemishwana
Kusuka ekuvezeni imibono kuya enkambisweni yenkolo
Into yokuqala okufanele sikutshele ngayo ngamasiko ase-Italy ukuthi sizokutshela ngezwe, njengawo wonke umuntu, eliningi. Ngendlela efanayo amasiko ase-Andalusia ahluke ngayo kulawo aseGalician, nawo amaSicilian enza okufanayo kulawo asePiedmontese. Kodwa-ke, futhi njengakuzo zonke izizwe, isisekelo esivamile samasiko senza ukuthi amasiko abiwe yiwo wonke amaNtaliyane. Ake sizibone.
Ukuchaza, isiNtaliyane ngokweqiniso
Ukucacisa, isiko e-Italy
Enye yezinto ezokumangaza kakhulu lapho uhambela e-Italy yiyona indlela yokuxhumana yezakhamuzi zakhona. Kusukela kwabasenyakatho kakhulu kuya kulabo abahlala eningizimu esezingeni eliphakeme, bazwakalisa kakhulu, kuze kufike ezingeni lokuthi, kwesinye isikhathi, babonakala bephikisana.
Yize kuzwakala kuyinto ehlekisayo, kuyiqiniso, akuyona nje ifilimu yakudala. AmaNtaliyane ayaziveza nazo zonke izitho zomzimba wakho. Bakhomba ngezandla ngokweqile, bakhulume ngezwi eliphakeme futhi kwesinye isikhathi bahambisane nokuthinta kwabo neminye iminyakazo. Ngamafuphi, kuma-transalpino ukuxhumana okungenamlomo kuyalingana noma kubaluleke ngaphezu kwamagama.
Ukudla, isiko phakathi kwamasiko ase-Italy
Itafula elilungele ukudliwa
Kunamasiko amaningi ase-Italiya ahlobene nomhlaba wokudla. Kumele zikwenze kokubili nezitsha ezithokozelwa izakhamuzi zakhona kanye namasiko asendulo angakunika ukungathandi uma ungazazi. Sizokutshela ngabo.
Kufanele wazi ukuthi uma uvakashela umNtaliyane ekhaya lakhe, ukudla kumele. Uzohlala ekunikeza okudliwayo nokuphuzwayo. Uzokucela nokuthi uhlale naye isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa. Singakutshela ukuthi ukudla kunjalo isiko lonke kumaNtaliyane. Ngaphezu kokudla, kubo kuyisenzo senhlalo.
Ukuya esidlweni ezweni, kufanele wazi izinto ezimbalwa. Imvamisa, into yokuqala ozoyibona etafuleni yi- umqali. Ngaleli gama zonke izinhlobo zabaqalayo zibizwa ngokuthi, njengoba igama labo liphakamisa, ezingakaze zenziwe nge-pasta. Kungaba amasoseji noma ukudla kwasolwandle. Kepha zivamile kakhulu, ngokwesibonelo, i- caponata, isitshulu esivamile saseSicily; i i-fritatta, uhlobo lwe-omelette egxishiwe; i UmAfrika, ushizi o-crispy ojwayelekile we-Friuli, noma i- supplì I-Romano, eyi-croquette yelayisi.
Ngemuva kwe-antipasto, uzonikezwa isifundo sokuqala bese kuthi okwesibili. Enye yazo kungaba yi-spaghetti futhi ungalokothi usike noma uyidle ngesipuni. KumaNtaliyane kungukuhlanjalazwa. Ekugcineni, isidlo sizophela il dolce. Kodwa-ke, isiphetho sangempela kuzoba yi ikhofi, okungenakugwemeka e-Italy futhi okufanele wazi ezinye izinto ngakho.
Okuthile okungafanele ukwenze, ikakhulukazi ezindaweni ezinjengeTuscany, ukumane u-ode ikhofi. Bazokubuka njengomfokazi. Cela i- i-expresso machiatto noma usike, eyodwa i-ristretto noma kushoda ikhofi noma kabili noma double. Kodwa-ke, okujwayelekile kakhulu yi- cappuccino, enezingxenye ezilinganayo zekhofi, ubisi olushisayo negwebu lobisi.
Ekugcineni, kulesi sigaba eside esinikezelwe ekudleni e-Italy, sizokutshela ukuthi, nge-transalpine, unina nogogo wakhe bangabapheki abahamba phambili emhlabeni. Kubo, i Mamma futhi i ugogo bapheka kangcono kunanoma ngubani omunye futhi abakaze bakubuze. Hhayi ngalutho, kumNtaliyane umndeni wakhe ungcwele.
Ukukholelwa, okuvela kumaNtaliyane
Esinye isici se-transalpinos inkolo yabo ejulile. Ngaphandle kweqiniso lokuthi, ngokwezibalo, ama-30% kuphela ama-Italiya avumayo ukuthi angamaKatolika, inkolo ibaluleke kakhulu kubo futhi kubalulekile ukuthi uyihloniphe. Empeleni, kubalulekile ukuthi, esikhundleni salokho, cishe abantu abangama-90% bathi bangamakholwa.
Akumangalisi ukuthi e-Italy i I-Vatican (lapha sikushiya i-athikili emayelana naleli lizwe), isihlalo senkolo yamaKatolika. Ngakho-ke, ezweni elisentabeni kunemishado eminingi yenkolo nokubhabhadiswa, kanye neminye imikhosi efana nemikhosi kanye nodwendwe lokuhlonipha abangcwele. Futhi, njengakho konke abakwenzayo, amaNtaliyane baphila ngokushisekela inkolo yabo.
Ukushayela, inkinga elindile
Izimoto ezihamba ngeRoma
Lokho esizokutshela khona kungazwakala njengokufingqiwe futhi, ngaphezu kwalokho, ukwenza okujwayelekile. Kodwa-ke, ukuyikholwa kungasindisa impilo yakho. Ngoba ngokuvamile, amaNtaliyane angabashayeli abesabekayo. Noma, kungcono ukusho, ukuhlonipha okuncane kakhulu kwemithetho yomgwaqo.
Emadolobheni amakhulu ezwe, izimoto zeqa amalambu abomvu, zidlule ngokungafanele futhi ngayinye ijikeleza lapho ifuna khona. Imigwaqo ibukeka njengezijikelezo zangempela zomjaho. Kepha ngaphezu kwakho konke, ungaweli umgwaqo onqamulelayo ukholelwa ukuthi izimoto zizoma. Abakaze.
Izingubo, emuva emfashini
Ukukhonjwa kwe-Italy ngemfashini sekuyinto ethandwayo. Kuyiqiniso ukuthi abanye babaqambi abakhulu bebengu-transalpine, kepha akubalulekanga kangako kuma-Italiya ajwayelekile ukuthi agqoke ngokuya ngemikhuba yakamuva.
Kodwa-ke, kuyiqiniso ukuthi, ngokujwayelekile, bakhathazeke kakhulu ngokubukeka kwabo. Ngeke uzibone zingcolile ngisho nasezitolo ezinkulu noma ejimini. Baqikelela kakhulu nge ubukhona obuhle (ukubukeka okuhle) futhi lokhu akubandakanyi izingubo kuphela, kodwa futhi nekhanda nekhanda nezinye izinsimbi.
I-Opera, inkambiso yangempela yase-Italy
Isethulo se-'Aída 'sikaVerdi
Ngokuvamile, amaNtaliyane ayenjalo bathandi bomculo abakhulu. Futhi, phakathi kwazo zonke izinhlobo zomculo, i-opera iyazithanda. Akukona nje ukuqondana kwezinto, ngoba lolu hlobo lokuqanjwa lwazalelwa ezweni laseTranspine.
Ukudalwa kokuqala okungathathwa njenge-opera kwaba Daphne, of UJacopo Peri, owabhala ngo-1537. Kodwa-ke, kungaba ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye lapho uhlobo lufinyelela ekuphakameni okukhulu kokuthandwa ngababhali abanjengo UGioachino Rossini, UFrancesco Bellini futhi ngaphezu kwakho konke, UGiuseppe Verdi.
Lesi sakamuva sinesibopho sokwandisa i-opera. AmaNtaliyane aguqule imisebenzi yawo yaba uphawu lokuhlanganiswa kwezwe futhi, ngayo, baduma kakhulu. Kusukela lapho, bekulokhu kuyisifiso samaNtaliyane kuphela uma kuqhathaniswa naleso abazizwela ngaso ibhola, elinye lamasiko amakhulu e-Italy, yize lokhu kuvamile kwamanye amazwe amaningi.
Ukubhikisha, okuhambisana nohlamvu lwase-Italy
Okunye okuzokumangaza uma uhambela e-Italy ukuthi izakhamizi zakhona zichitha isikhathi sazo zibhikisha ngayo yonke into. Okuthile, ngaphezu kwalokho, kugcizelelwa yisimo sakhe sothando. Akukhathalekile noma kungenxa yokuthi izithuthi zomphakathi abebezilindile zifike sekwedlule isikhathi, ngoba uHulumeni uyeba kubo noma, empeleni, ngoba iqembu labo lebhola libi, ama-transalpino ahlala enesikhalazo.
Yize kunjalo bayakuthanda ukubhikisha njengoba nomona ngezwe labo. Lokhu kusho ukuthi akufanele ukhononde nge-Italy. Uma wenza kanjalo, azoba ngobuzwe kakhulu emhlabeni futhi azokwenza isimilo sakho sibe sibi. Yibo kuphela abangagxeka izwe labo.
Siluqedela lolu hambo lwamasiko ase-Italy ngokukhuluma nawe ngezinye zezinkulumo ezivamile kulo lonke izwe ezilingana nemishwana yethu ebekiwe. Yize kungolimi oluvamile, uma uzisebenzisa, uzobukeka njenge-Italian yangempela.
Isibonelo, ukuze quattr'occhi kusho amehlo amane, kepha kusetshenziselwa ukusho ukuthi udaba kufanele luxazululwe ngabantu ababili, kungabikho omunye umuntu ongenelela. Ukuthumela umuntu ozovala umlomo, bathi i-aqua ku-bocca. Ngokwengxenye yayo, isisho ligarsila kudito ukuhumusha njengokukubophela emunweni, kepha kusho ukuthi umuntu uyakhumbula umonakalo owenziwe kuye ukuze aziphindiselele kamuva. Uma kuthiwa i-cadere della padella alla brace kusho ukuwa usuka epanini ungene ku-grill, kepha kusho ukuthi usukile esimweni esibi waya kwesibi kakhulu. Kungafana nokusuka kwethu eGuatemala siye "kwi-guatepeor." Ekugcineni, uma bethi umuntu unjalo I-brutta woza i sette peccati capitali Babonisa ukuthi yimbi njengezono eziyisikhombisa ezibulalayo, ukuthi izolingana nekhala lethu elibi.
Sengiphetha, sikubonise okunye okubaluleke kakhulu amasiko ase-Italy. Ngokusobala, awukwazi ukukhohlwa ukuthi yizwe lonke elinamasiko ahlukene ezifunda, kepha bonke labo esesibabalile ungabathola kusuka enyakatho kuye eningizimu nasempumalanga kuya entshonalanga. Futhi sisashiya amanye amasiko afana nomkhuba we ukwethula umuntu ngeziqu zaseyunivesithi abaziphethe (ngokwesibonelo, ummeli uBuscetti) noma ukuthanda kwakhe i- aperitivo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Italia » Amasiko ase-Italy